MSF oo furtey bar internet oo laba luqadood ku qoran oo ka tarjumeysa hawsheeda ay ugu gargaareyso Soomaalida - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
MSF oo furtey bar internet oo laba luqadood ku qoran oo ka tarjumeysa hawsheeda ay ugu gargaareyso Soomaalida
05.08.2010 | Taakulada Soomaalida, War-Saxaafadeed
Nayroobi, 5 Agoosto 2010 – Ururka Caalamiga ah ee Bani’aadamnimada Médecins Sans Frontières (MSF) waxa uu ku faraxsan yahay in uu ku dhawaaqo in uu furey shabakaddiisa internetka oo ku hadasha labada luqadood ee Ingiriisiga iyo Soomaaliga, www.somali.msf.org. Shabakadda ayaa qoreysa wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad ku saabsan hawlaha MSF ay ku gargaareyso Soomaalida ku nool Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, Somaliland, Jabuuti, gobolka Soomaalida ee Itoobiya, Kenya, Yaman, Masar iyo Malta.
Wareysiyo lala yeelanayo shaqaalaha iyo bukaanka, fiidiyowyo iyo sawirro laga soo duubey/qaadey goobaha shaqada ayaa si toos ah kuugu xiraya hawsha MSF ay ka hayso goobahaas.
“Waxa aan aad ugu faraxsanahay in aan awood u yeelano in aanu bilowno boggan cusub” ayay tiri, Madaxa MSF ee Somalia,Monica Camacho “Maaddaama ay tahay urur caafimaad oo ka shaqeeya xaaladaha degdegga ah ayaa hawlaha MSF ay yihiin kuwo si joogto ah ula qabsanaya xaaladaha jira oo si joogto ahna isu beddelaya si aan awood ugu yeelanno in aan wax ka qabanno baahiyaha ugu waaweyn ee jira. Boggan waxa uu muujinayaa hawlaha kala duwan ee MSF waxaana uu si joogto ah macluumaad waqtiga la socda u siinayaa cid kasta oo daneyneysa in ay wax badan ka ogaato arrimahan.”
War saxaafadeedyo iyo warbixinno caafimaad iyo kuwo maaliyadeed ayaa laga heli karaa bogga, kuwaas oo ay la socdaan macluumaad ku saabsan hawlaha MSF ay ka waddo meelo kala oo dunidan ka mid ah. Soo-booqdayaasha shabakadda ayaa codsan kara in loo soo diro war-side saddex-biloodle ah oo macluumaadkii ugu dambeeyey ee MSF toos ugu soo diraya e-mailkooda.
“Wargaarsiintu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah hawlaha MSF,” ayaa uu yiri Sarkaalka war faafinta MSF ee Soomaaliya, Ahmed Dahir Noor. “Boggan internetka waxaa uu qayb ka yahay geeddi-socod lagula xiriirayo Soomaalida haddii ay yihiin kuwa gudaha dalka ku nool iyo kuwa dibadda Soomaaliya joogaba waxaana lagu doonayaa in lagu hubiyo oo lagu muujiyo in aan nahay kuwo hawshooda ay daahfurnaan ku saleysan tahay.”
Iyada oo si joogto ah uga shaqeyneysey Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya tan iyo 1991gii, MSF waxa ay weli tahay hay’adda ugu weyn ee bixisa adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah waxaana mashaariic muddo dheer socda ay ka fulineysaa gobollada Banaadir, Baay, Galgaduud, Hiiraan, Jubbada Hoose, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Mudug. Sanadka 2010ka waxa ay MSF shaqo ka bilowdey gobolka Maroodi Jeex ee Somaliland. Sidoo kale kooxaha MSF waxa ay mashruuc kale ka furayaan gobolka Sanaag ee Somaliland. Gobolka Soomaalida Itoobiya, ayaa MSF waxa ay ku gargaareysaa qaxootiga Soomaaliya ka yimid iyo sidoo kale dadka Soomaalida ah ee ku nool Itoobiya. MSF waxa ay sidoo kale ka shaqeyneysaa Jabuuti, Masar, Kenya, Malta, waxaana muddo dhow ka hor, ay ka shaqeyneysey, Yaman iyada oo daryeel caafimaad siineysay qaxootiga Soomaaliyeed iyo magangelyo-doonka.
MSF oo la aasaasey 1971gii, waa ururka bani’aadamnimada ee caafimaadka ee ugu weyn dunida, isaga oo mashaariic ku leh in ka badan 65 dal. Yoolka MSF waa in gargaar degdeg ah ay siiso dadka ay saameeyeen iskahorimaadyada hubeysan, cudurrada dillaaca, goobaha aan laga heli daryeelka caafimaadka iyo masiibooyinka dabiiciga ama kuwa dad-sameega ah. MSF waxa ay dadka siisaa gargaar ku saleysan keliya baahida qofka, iyada oo aan loo eegeynin sinjiga, diinta, dheddig-labood, siyaasad ama qabiil.
Tags: bar internet, mashaariicda, wax-qabad